Gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland oo safar shaqo ugu amba-baxay dalka Turkiga – Kalfadhi
Gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo-daareed ayaa maanta safar shaqo ugu amba-baxay dalka Turkiga, sida lagu sheegay qoraal lagu baahiyay boggiisa.
Gudoomiyuhu wuxuu sheegay in safarkaas uu yahay mid shaqo, balse faahfaahin lagama bixin in uu casumaad ka helay dowladda Turkiga iyo jadwalka safarkiisa.
Mudanayaal ka tirsan golaha wakiilladda iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamanka Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa gudoomiyaha ku sagootiyay goroonka Gen. Maxamed Abshir ee Garowe.
Golaha wakiillada ayaa ku jira fasax ah ilaa bartamaha Juun, markaas oo uu furmayo kalfadhiga xiga sida uu dhigayo xeer-hoosaadka baarlamanku.
Waa socdaalkii labaad ee gudoomiyuhu dibedda ugu boxo teer iyo markii la doortay 4tii Jannaayo, 2019. Wuxuu safar shaqo oo qaatay in ka badan labada toddobaad ku tegay dalka Djibuuti dabayaaqadii febraayo ilaa ku dhowaad bartamihii Maarso ee sannadakan.